Ciidamada Cirka Soomaaliyeed (SAF) (Af Ingiriis : Somali Air Force), waa awooda ciidanka cirka oo ah qeyb ka tirsan Ciidanka Qalabka Sida ee wadanka Soomaaliya. Ciidanka cirku waxay masuul ka yihiin ilaalada hawada iyo cirka wadanka Soomaaliya. Markii wadanka Soomaaliya xoriyada qaatey 1960kii ayaa la aasaasay ciidanka cirka, waxaana hogaanka ciidankaas gacanta ku hayay duuliyihii ugu horeeyay Cali Mataan Xaashi. Si kastaba ha ahaatee, Ciidanka Cirka Soomaaliya waxay wakhti ahaayeen kuwa ugu awooda badan Geeska Afrika. Burburkii wadanka 1990kii ayaa burburisay ciidankaasi; waxaase dib-loo soo nooleeyay sanadkii 2010.
Af Ingiriis : Lean Together!